मोटोपन किन बढ्छ ? मोटोपन व्यवस्थापन गर्नु भनेको शरीरलाई स्लिम बनाउनु हो ?? - हाम्रो शब्द
सुनसरी । हामी यो संसारमा प्राय धेरै किसिमाका खानेकुराहरु खाने गर्दछौँ जस्को अनुरुप मोटोपनाको सिकार भएर बिभिन्न किसिमका रोगको श्रजना गरिरहेका हुन्छौँ । कतिपय हामीहरुलाई कहिले दुव्लो हुदाँ कस्तो दुब्लो अनि मोटाउदा कति मोटो भन्ने प्रश्न सदैब उब्जिरहेको हुन्छ । तर यदि हामी दुब्लो छौँ भने हामीलाई मात्र हल्का मोटाएकाको व्यक्तिको मुखबाट मात्र सुन्न पर्छ तर हामी त्यो शब्द मोटाएको र जस्ले मोटोपनाको अबस्थाको बारेमा समस्या भोगको व्यक्तिको मुखबाट कमै सुन्न पाइन्छ । हाम्रो समाजमा धेरै व्यक्तिको मुखबाट अबस्यनी यो प्रश्न आउँला कि मोटोपन किन बढ्छ ? यो प्रश्न भन्दा पनि अर्को प्रश्नले हामीलाई बढी सताइरहेको छ ।
-मोटोपन कसरी घटाउने ?
जबकी अघिल्लो प्रश्नमै त्यसको समाधान छ । अर्थात मोटोपन बढ्ने कारणहरु खोतलेर त्यसको सही व्यवस्थापन गर्नु नै मोटोपनबाट छुटकारा पाउने सरल उपाय हो ।
मोटोपन हुने केही तितो सत्यहरु ?
-जवाफ हामीसँग नै छ । अनुचित खानपान, बढि आराम, मासिक धर्मको अनियमितता, थाइराइड, हार्मोनल असन्तुलन आदि कारणले मानिसको वजन बढ्छ ।
के यो आफैमा एउटा रोग हो त ?
मोटोपन आफैमा रोग होइन । तर, यसले रोगलाई जन्म दिन्छ । रोग भन्दा पनि हामी ज्यानलाई फिटनेस राख्न मोटोपन कसरी घटाउने भनेर घोत्लिरहेका हुन्छौ । मोटोपन भएपछि शरीर भद्दा हुन्छ । न लुगाफाटो लगाएको सुहाउँछ, न हेर्दा छरितो नै देखिन्छ । हामीहरुलाई अर्कोतिर हिँडडुल गर्न सहज हुँदैन । शरीर मोटो भएपछि फुर्ति घट्छ । केही गर्नसक्ने कामहरुमा समस्या झल्नु पर्ने हुन्छ ।
यसले जन्माउन सक्ने घातकरोगहरु
मोटोपन घटाउनु वा मोटो हुँदै नहुनु वा मोटोपन व्यवस्थापन गर्नु भनेको शरीरलाई स्लिम बनाउनु मात्र होइन । संभावित रोगको जोखिमबाट बच्नु पनि हो । मोटोपनले उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलोस्टोर लगायत मुटु सम्बन्धी रोग जन्माउँछ । यसले स्वासप्रश्वासमा असर गर्छ । भनिन्छ, बाँझोपन पनि ल्याउँछ ।
दक्षिण एशियाको तथ्यांक
मोटोपन वर्तमान समयको ठूलो चुनौती हो । अहिलेको जीवनशैलीले मोटोपनलाई बढाव दिइरहेको छ । नेपाली समाजका लागि मोटोपन टाउको दुखाईको विषय हो ।
तर, नेपाली परिवेशमा मात्र होइन, विश्वकै लागि यो टाउको दुखाईको विषय हो । ग्लोबल न्युट्रिसनले भर्खरै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले भन्छ, अघिल्लो बर्ष दक्षिण एसियामा मात्र करिब २४ प्रतिशत महिलामा मोटोपनको समस्या देखिएको छ । नेपालमा २२ प्रतिशत महिलालाई मोटोपनले गाँजेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ, ‘विश्वमा करिब एक अर्ब ९ करोड मानिस मोटोपनको शिकार भएका छन् । यसमा बालबालिकाको संख्या पनि उत्तिकै छ ।
मोटोपन किन हुन्छ ? भन्ने समस्याको निराकरण खोज्ने हो भने यसबाट छुटकारा पाइन्छ । यो निम्तीनु मुलत हाम्रो खराब जीवनशैलीको कारण हुन्छ । एकातिर निस्क्रिय दिनचर्या, अर्कोतिर अस्वस्थ्यकर खानपान । फास्टफुड, चिल्लोचाप्लो, मसलेदार खानेकुराको सेवन अत्याधिक बढेको छ । त्यसअनुरुप शारीरिक सक्रियता घट्दै गएको छ ।
हामी काम पनि बसीबसी गर्छौ । खेल्नका लागि पनि मैदान होइन, मोवाइल वा भिडियो गेम रोज्छौ । यता भोज, पार्टी, फेमेली गेटटुगेदर, चाडपर्व आदिको नाममा खाने संस्कृति बढ्दो छ । यहि कारण हामी मोटो हुँदैछौ । भनौ, हामीलाई मोटोपनले गाँज्दैछ ।
चिकित्सकहरुले भन्दै आएका छन्, खानका लागि बाँच्ने प्रवृत्ति नै यसको मूल कारण हो । बाँच्नका लागि खाने होइन, खानका लागि बाँच्ने ।
मोटोपनबाट छुटकारा पाउन मूलत आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । निस्क्रिय बस्ने वा शारीरिक गतिविधि नगरी बस्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । शरीर चलायमान हुनुपर्छ । त्यही अनुरुप स्वस्थ्य र सन्तुलित खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ । त्यससँगै व्यायामलाई जीवनकै अभिन्न पाटोको रुपमा लिनुपर्छ ।
यस्को सिकारहुनबाट बच्ने केही उपायहरु निम्न छन् :-
– चिल्लो, तारेको, भुटेको, मसलेदार खानेकुरा त्यागौं । सकेसम्म उसिनेको खानेकुरा सेवन गरौं । रेष्टुरेन्टको खानेकुरा, फास्टफूड, जंकफूड खाने नगरौं ।
– एकै पटक धेरै खाने, खाना खाइसकेर सुत्ने जस्ता बानी त्यागौं । थोरै थोरै तर धेरै पटक खानेकुरा सेवन गरौं ।
– खानेकुरामा सलादको मात्रा बढी हुनुपर्छ । ताजा फलफूल सेवन गरौं । फलफूल, सलादको सेवनले मोटोपन नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्छ ।
– बढिभन्दा बढि पैदल हिँड्न प्रयास गरौं । मोटोपना घटाउन कसरतको ठूलो भूमिका हुन्छ । नियमित कसरतले शरीरलाई चुस्त र स्लिम राख्छ ।
– नास्ताले हाम्रो दिनभरीको पोषणसम्वन्धि आवश्यकतालाई पूरा गर्छ । त्यसैले नास्तालाई बढिभन्दा बढि पौष्टिक बनाएर खाने गरौं ।
– ओखर बेस्सरी खानुपर्छ । यसले ओमेगा ३ फ्याटी एसिडको राम्रो मात्रा प्राप्त हून्छ, स्मरणशक्ति तेज रहन्छ र जवान राख्छ ।
– स्लीम राख्न दहीले पनि निकै मद्दत गर्छ । दहीमा प्रोबायोटिक्स हुन्छ, जुन राम्रो ब्याक्टेरिया हो । यसले शरीरको प्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ । दैनिक एक कचौरा दही सेवन गर्नुभयो भने शरीरमा उर्जा पनि प्राप्त हुन्छ ।
– आइरनबाट भरपुर चिजहरु जस्तै स्याउ र मूला खाँदा शरीरमा ताकत प्राप्त हुन्छ । साथै केही समय घाममा बसेर बदाम खाएमा स्फूर्तिको महसुस गर्नेछन् । स्रोतः अनलाईन खबर
महामारीमा वाइसीएल : विपन्न बस्तिमा ट्याङ्की, प्रहरीलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
जेल जान पनि, मर्न पनि तयार भएर ओली प्रवृत्तिविरुद्ध १९ पेजको डकुमेन्ट लेखेँ : प्रचण्ड